कोरोना संक्रमित युवकको पीडा – Sadarline
धनगढी : मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका धनगढीका ३४ वर्षीय पुरुषलाई कोरोनो संक्रमण भएको पुष्टि भयो । शुक्रबार साँझ पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनलाई अस्पतालले छुट्टै आइसोलसेन वेडमा राखेको छ । तर, आफूलाई चिकित्सकले जाँच पनि नगरेको र औषधि पनि नदिएको उनको आरोप छ ।
कतिसम्म भने उनले आफ्नो रिपोर्ट पोजेटिभ आएको समेत सहज रुपमा थाहा पाउन सकेनन् । धनगढीमा एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको खबर सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि आफूले डाक्टरलाई फोन गरेर सोधेपछि मात्रै चिकित्सकहरुले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिएको उनले बताए । संक्रमित ती युवाका अनुसार उनलाई अस्पतालले अहिले भर्ना भएको बेला राखिएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राखेको छ ।
उनले भने, ‘मलाई औषधि र तातो पानीसम्म कसैले सोध्न आउँदैनन् ।’ जबकी कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा सरकारले लिने भनिएको छ । तर, आफूले अहिलेम्म खाना र तातोपानीसमेत घरबाट ल्याएर खाइरहेको उनले सुनाए । अब, परिवारका सबै
सदस्य क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कसले खाना ल्याइदिन्छ भन्ने चिन्ता बढेको उनले सुनाए । ती युवकलाई कारोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि परिवारका सबै सदस्यलाई रंगशालामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र नमुना संकलन गरिँदैछ । ‘अहिलेसम्म मलाई घरबाटै खाना ल्याइएको थियो ।
घरका सबैलाई रंगशाला राखिएको छ अब कसरी खाना ल्याउने ? उनको गुनासो छ । अस्पतालले झुलबाहेक केही नदिएको उनले बताए । चिकित्सकहरु पनि डरले नजिक नआएको हुनसक्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘समस्या भए कसलाई भन्ने पनि थाहा छैन ।’ अनलाइनखबरबाट
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : कोरोना भाईरसको संक्रमण भित्रिन नदिन तथा रोकथामका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ ले वडाभित्रका सबै बस्तीहरुमा घरदैलोमार्फत मास्क र साबुन प्रदान गरेको छ । वडाले उपस्वास्थ्य चौकी पुरैनीमार्फत महिला स्वयमसेविका र कर्मचारीहरुको सहयोगमा प्रत्येक घरधुरीमा मास्क र साबुन प्रदान गरेको हो । वडाध्यक्ष बिद्याराम बर्माले स्थानीय […]